प्रियंकाले लगाएको नयाँ ड्रेस देखेपछि फ्यानले भने कसको लुंगी लगायौ ? लुंगीमा बुडि पो देखिनु भयो त ? – Namaste Host
प्रियंकाले लगाएको नयाँ ड्रेस देखेपछि फ्यानले भने कसको लुंगी लगायौ ? लुंगीमा बुडि पो देखिनु भयो त ?
March 19, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on प्रियंकाले लगाएको नयाँ ड्रेस देखेपछि फ्यानले भने कसको लुंगी लगायौ ? लुंगीमा बुडि पो देखिनु भयो त ?
काठमाडौँ । आँफुभन्दा निकै कान्छो उमेरका अमेरिकी गायकसँग धुमधामले विबाह गरेकी बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा बेला बेलामा विबादमा आउने गर्छिन् । प्रियंका आफैंले लगाएको पहिरनलाई लिएर प्रियंका ट्रोल बनेकी हुन् ।
प्रियंकाले हालै एक कार्यक्रमका लागि गिंगम ड्रेस लगाउँदा उनलाई फ्यानहरूबाटै उनी ट्रोल बनाएका हुन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले उनको कपडालाई लुंगीसँग तुलना गरेका छन् । यद्यपी उक्त पोशाकमा उनी निकै खुलेकी छन् । प्रियंकाले लगाएको पँहेलो र कालो कलरको डो डेस निकै खुल्ला छ ।
चैत्र ०५ – एजेन्सी । अमेरिकाको क्यालिफोर्निया निवासी लेस्ली पिल्ग्रीमामक एक महिलाले सवारी चालक परिचय पत्र बनाउन स्थानीय सवारी साधन विभाग (डीएमभी)मा सम्पर्क राखिन् ।तर सो विभागले आफ्नो मास्क लगाएको तस्वीरसहितको परिचयपत्र पठाइदिँदा उनी छक्क परेकी छन् ।हन्टिङटनबिच निवासी उनले फोक्स ११ लसएन्जेल्सलाई बताएकी छन्–
‘म सवारी विभागमा मास्क लगाएर पुगेकी थिएँ । म लाइनमा सबैभन्दा अगाडि थिएँ । क्यामेरासामु उभिँदासम्म मैले मास्क लगाइनै रहेकी थिएँ । म मास्क खोल्न लगाउने अनुरोधको प्रतीक्षामा थिएँ । कसैले केही पनि भनेनन् । बरु मैले क्यामेरामा हेर्नुस् भन्ने आवाज सुनें। त्यसपछि क्लिक आवाज सुनियो ।
तर त्यसमा उनको खरानी रंगको तस्वीर मास्क लगाइएको तस्वीर थियो । आफ्नो आँखा, आँखीभौं र निधार, केश र घाँटी मात्र देखिने तस्वीर देखेर निकै हाँसो उठेको उनले बताएकी छन् ।
हुनत कोभिड १९ को महामारीको कारण सबैले सामन्यतया जहाँ पनि मास्क लगाउने गरेका छन् । डीएमभीले अहिलेसम्म यही एउटै मात्र त्रुटिपूर्ण घटना भएको स्विकारेको छ । डीएमभीले पुनः उनीसँग भेटेर नयाँ तस्वीर खिचाउने काम भइसकेको पनि जनाएको छ ।